प्रकास सपुतको शम्भु राईलाई पत्र -सर भाका मिलेकै छैन ? का मिलेको छ ?
शनिवार, आश्विन ३, २०७७ ०४:२२:३८
बिहिवार, असार ५, २०७६ गोदावरी न्युज
काठमाडौँ — युट्युबमा अपलोड भएको २५ औं दिनमा पनि प्रकाश सपूतको ‘गलबन्दी’ गीत एक करोड ३५ लाखभन्दा बढी भ्युजसहित अझै नेपाल ट्रेन्डिङको ३३ औं स्थानमा छ । नेपाली ग्रामीण समाजमा गाइने रोधी परम्परामा आधारित उक्त लोकभाकालाई यति बेला भने चोरीको बात लागेको छ । सपूतको गीत २०४८ सालमै रेकर्डिङ गरिएको गायक शम्भु राईको ‘आऊ नाचौं साथी हो...’ सँग लय मिल्न गएको आरोप लागेको छ ।
चोरीको आरोप लागेपछि सपूतले बुधबार राईलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखे । उनले उक्त पत्र आफ्नै ब्लगमा पोस्ट गरे ।
यस्तो छ पत्र !
प्रकाशित मिति: बिहिवार, असार ५, २०७६, ०३:०६:००